Iipakethe zeNtloko zeIqhwa
Imicrowave ishushu Imeko yeGel Cap
Ipakethe yokunceda iMigraine
Ityhubhu eshushu yokufudumeza ijeli
Isongelo seNtloko sokuPakisha iQhwa
Iipakethe zeqhwa leNeck
Igxalaba lisongele ipakethe yomkhenkce
Intamo isongele ipakethe yomkhenkce
Ipakethi yomkhenkce ngomtya
Iipakethe zokuKhulula iintlungu
Emva kwepakethe yomkhenkce
ingxowa yomkhenkce yonyango
Ipakethe yomkhenkce wehemorrhoid
ishushu kunye nepakethe yegel
Umtya wangasemva kunye nengxowa yomkhenkce
Ukukhululeka kwezemidlalo Ukuncedwa kwePakethe
iqatha brace kunye pack ice
ukugoba idolo kunye nomkhenkce
I-GEL ICE SLEEVE
Unyango olubandayo lweSokisi yoKhathalelo lweenyawo
Iisokisi zonyango olubandayo
Ubuhle kunye noKhathalelo lobuqu
ijeli yamehlo compress
Ijeli yobuso beGel Bead
ijel bead imaski yobuso
Imaski yamehlo ejeli
Ibhotile yebhiya epholileyo
ibhegi epholileyo yewayini
Inja yeGel epholisa iMat
isilili sokupholisa ibhedi
Umama kunye neentsana zomkhenkce
Ipakethi yomkhenkce yabantwana
Iphepha leBele leBele
Ipakethi yasemva kokubeleka
Ukujonga iGel Cap
Gel iso imaski yokucinezela
Ijeli ICE SLEEVE
Umkhono wejel obandayo noshushu wokucinezela, okwaziwa ngokuba ngumkhono womkhenkce, yimveliso esandula ukwenziwa, eyahlukileyo kunesiqhelo
Iphakheji yokubanda neshushu iyashushubeza kuba ijeli ngaphakathi ayihambi.Iyimveliso enxibayo, umphezulu wokusetyenziswa kwethambile
ilinen, inonxibelelwano oluhle ngakumbi kwaye kulula ngakumbi ukuyisebenzisa, uzinzo oluphezulu njalo njalo.
Ngokukodwa yeyamacandelo onyango lokunyanga ngokunyanga, anokunceda ngokufanelekileyo kunyango lwesimo sonyango
ukwenzakala ngenxa yeempawu zabo zomzimba zokugcina kubanda okanye ukugcina ubushushu.Ingayiphumlisa imisipha yakho, kwaye kubalulekile kuyo
ikiti yakho yonyango yosapho.
Imvelaphi: Jiangsu, China
Uhlobo loBonelelo: OEM / ODM
Isiqinisekiso: I-CE FDA MSDS FIKELELA ISO9001
Umbala: Nawuphi na umbala ungenziwa ngemfuneko
Amandla okubonelela: 1000000 Piece / Pieces Inyanga nganye
Ungenziwa ngemfuneko kunye nabuphi na ubungakanani kunye nemibala ene-MOQ ephezulu.
UKUNCEDA IINTLUNGU ZAMADOLO Ukujolisa ngaphambili nangasemva kwedolo ngoxinzelelo oluhlengahlengiswayo kunye nonyango olushushu okanye olubandayo, umkhenkce obandayo wedolo unciphisa ngokufanelekileyo ukudumba, iintlungu kunye nokudumba ngenxa yokudinwa kwemisipha, ukwenzakala okanye uqhaqho. Ukuqiniswa kwamadolo athambileyo kukwabonelela ngesiqabu esihle se-sprains kunye ne-strains, i-ACL, isifo samathambo, ukonzakala kwezemidlalo, utyando kunye nokunye.
UHLOBO OLUShushu okanye OLUBANDAYO: Kuquka iipakethe zejel ezisuswayo kunyango olushushu okanye olubandayo. Ipakethi nganye ityibilika ngokulula epokothweni. Iipakethe zejeli ezingenabungozi zinokuphinda zisebenze, zinobungqina bokuvuza kwaye akukho-latex.
Ubukhulu: UMZIMBA OMNYE ulingana kakhulu
Umbala: Umbala ococekileyo / umbala oprintiweyo njengemfuno yakho
Isixhobo: 100% Ipholiyesta cover +2 PVC iipakethe zomkhenkce
Phawu: Unyango olushushu nolubandayo lonke luyafumaneka
Package: OPP ibhegi + ibhokisi okanye ibhokisi eyenziwe
MOQ: ngababini 500
Ukusetyenziswa: Inceda kuzo zonke iintlobo zokudumba kwezandla
ukupholisa inja mat
Ukwehlisa ingqokelela yeqondo lobushushu mat lokupholisa.
I-polymer ye-gel yokupholisa ifana ne-gel polymer ekupholiseni ukunamathisela iintsana.I-gel polymer enomxholo ophezulu wamanzi ufunxa ngokufanelekileyo ukushisa komzimba womntu ukuya emethini kwaye ixhomekeke ekuqhubeni okuphezulu kunye nokusabalalisa kwe-gel polymer ukufudumeza ukwenza into enhle ukutshintshisa ubushushu kunye nokudlulisa inkqubo phakathi kobushushu bomzimba womntu kunye ne-chill gel mat kunye naphakathi kokubanda kwe-gel mat nomoya.
Abantu abasebenzayo: Abathandi bezemidlalo bangaphandle okanye i-Ankle okanye abantu abonzakeleyo ngeenyawo
Ukusetyenziswa: Ubomi bemihla ngemihla + Imidlalo + yokuzivocavoca
Uhlobo: Uxinzelelo lwezeMidlalo i-Ankle Brace
Isiqinisekiso: I-CE FDA MSDS BSCI FIKELELA ISO9001
Inkonzo: Inkonzo ye-OEM ODM
Igama: Isisongeli esiSongelayo sePhepha esiShushu kunye noNyango
Ubukhulu: 38 * 11CM
MOQ: iiPC 500
Packaging: Ingxowa yokuchasa / ibhokisi eyiliweyo
Phawu: Yithi ndlela-ntle kwi-carpal tunnel pain yakho, isifo samathambo, ukudumba
Ukuphinda usebenzise i-hemorrhoid perineal postpartum yonyango lomkhenkce ukuphelisa iintlungu kushushu kwaye kubanda ipakethe ye-ice ice enemikhono ethambileyo
Unyango lwezixhobo zonyango
Indawo yokuQala: Jiangsu, China
Igama lebrand: HY, okanye i-OEM yohlobo lwakho
Ubukhulu: 30 * 10
Umbala: unokwenza ngokwezifiso, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-navy esitokisini
Phawu: Ilaphu eliphambili lekhava yangasemva
12345 Okulandelayo> >> Iphepha 1/5
Lwedilesi:I-Tongzhan Road, Idolophu yaseMeihua, iSihong County, iSixeko saseSuqian, kwiPhondo laseJiangsu, e-China 223900